Adiga marka hore! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ma jeceshahay is-diidsi? Ma dareentaa raaxo marka ay tahay inaad ku noolaato doorka dhibbanaha? Noloshu waa mid aad u roon haddii aad runti ku raaxeysan karto. Had iyo jeer waxaan telefishanka ka daawadaa sheekooyin xiiso leh oo ku saabsan dadka naftooda u huray ama naftooda u huraya kuwa kale. Tan waxaa si fudud looga arki karaa oo laga dareemi karaa nabadgelyada iyo raaxada qolka fadhiga.
Muxuu Ciise ka leeyahay arintan?
Ciise wuxuu u yeedhay dadkii oo dhan iyo xertiisiiba oo wuxuu ku yidhi: "Haddii qof doonayo inuu xer u noqdo, waa inuu isagu iskiraayo, iskutallaabtiisana i soo raac" (Mark 8,34 tarjumaadda New Geneva).
Ciise wuxuu bilaabay inuu u sharaxo xertiisii ​​inuu wax badan xanuunsan doono, loo diidi doono oo la dili doono. Butros wuxuu ka xanaaqsan yahay wixii Ciise yidhi Ciise baa isaga ku caayaya oo wuxuu yidhi Butros uma fiirsado waxyaalaha Ilaah, laakiin waa waxa dadka. Macnaha guud, Masiixu wuxuu sharxayaa in is-diidistu waa "wax Ilaah" iyo wanaag Masiixiyiin ah (Mark 8,31-33).
Muxuu Yidhi Ciise Masiixiyiintu miyaanay ahayn inay madadaalo leeyihiin? Maya, taasi maahan fikirka. Maxay ka dhigan tahay inaad naftaada beeniso? Noloshu maahan oo keliya adiga iyo waxa aad rabto, laakiin waa inaad ku hormariso danaha dadka kale danahooda. Caruurtaada marka hore, ninkaaga marka hore, afadaada koowaad, waalidkaa ugu horree, deriskaaga koowaad, cadowgaaga koowaad, iwm.
Qaadista iskutallaabta oo aad naftaada beeniso waxay ka muuqataa amarkii jacaylka ugu weynaa ee 1 Korintos 13: Maxay noqon kartaa? Qofka naftiisa diida waa samir iyo naxariis; iyadu ama iyadu waligeed masayr ama faani karto, weligeed kibir ma leh. Qofkaani ma edeb badnaado mana ku adkaysanayo xuquuqdooda ama dariiqyadooda, maxaa yeelay kuwa raacsan Masiixiyiinta maahan kuwo is-jeclaan. Isaga ama iyadu ma xanaaqsana mana fiirsadaan caddaalad-darrada la soo deristay. Markaad naftaada beeniso, kuma faraxsani cadaalad darrada, laakiin waxaad moodaa marka uu jiro sharci iyo run. Isaga ama isagu, oo taariikhdiisa nololeed ay kujirto is-diidis, ayaa diyaar u ah in wax walba laga gudbo, wixii yimaadda, sidoo kale diyaar u ah inuu rumaysto sida ugu wanaagsan ee qof kasta, u rajeeyo duruufaha oo dhan, oo wax walba adkaysto. Jacaylka Ciise ee qofka noocaas ah waligiis wuu fashilmaa.